cancer Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / cancer
स्थानीय गोरसबाट क्यान्सर जस्ता भयानक रोग नलाग्ने
Tags: alert-news, cancer, dangerdisease, health, localgores
काठमाडौँ, १० चैत । स्थानीय जातका गाईको दूध र दूधजन्य परिकारबाट क्यान्सरलगायतका कतिपय जटिल रोग निको हुने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । राष्ट्रिय जनावर भए पनि गाईमाथि नकारात्मक दृष्टि बढिरहेका बेला यसको संरक्षणका लागि बृहत् अभियान सुरु गरिएको छ ।… बाँकी अंश »
क्यान्सरको बारेमा जानकारी लिनुहोस्
Tags: cancer, cancerinformation, featured, healthtips, information
खबरडेस्क, २० फागुन । विश्वभर जस्तै हाम्रो देश नेपालमा पनि क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनेहरुको संख्यामा बृद्धि हुदै गएको छ । यो रोगबाट पीडित व्यक्ति र परिवारको जिज्ञासा हुन्छ-यो रोगले मलाई किन समात्यो ? यो रोगबाट बच्ने के के उपाया छन्… बाँकी अंश »
एक हातले दाउरा चिर्दै
Tags: alert-news, cancer, cutting-woods, daiji, Kanchanpur
कञ्चनपुरको दैजी गाविस–३ धरमपुरका ईश्वर विष्ट एक हातले दाउरा चिर्दै । क्यान्सरबाट एउटा हात गुमाएका अपाङ्ग बनेका विष्ट यसरी एउटै हातको सहाराले पनि दाउरा चिर्दै आइरहेका छन ।
दैनिक रुपमा गोलभेडा खाने पुरुष होसियार !!!
Tags: alert-news, cancer, health, health-tips, nepaljapan, prostate-cancer, tomatoes
खबरडेक्स, १९ मंसिर । जो व्यक्ति हप्तामा दसवटाभन्दा बढि गोलभेडा खाने गर्दछ उक्त व्यक्तिलाई प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा १८ प्रतिशत कम हुने गर्दछ । यो कुराको निष्कर्ष एक अनुसन्धानले निकालेको छ । यो निष्कर्षसम्म पुग्नका लागि ब्रिस्टोल विश्वविद्यालय र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका… बाँकी अंश »
एक करोड बढी फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित
Tags: alert-news, cancer, health
काठमाडौँ, २ कात्तिक । विश्वका एक करोड २० लाख मानिस फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित रहेको बताइएको छ । आज सम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्यान्सर सम्मेलनमा विश्वमा सबैभन्दा बढी क्यान्सर फोक्सोको हुने र सो रोग लागेका आधाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु पहिलो वर्षमा नै हुने गरेको जानकारी… बाँकी अंश »
क्यान्सरपीडितको उपचार्रार्थ रु २० लाख सहयोग
Tags: alert-news, baglung, bhimapokhara, bone-cancer, cancer, gandhi-hospital
बागलुङ, ५ जेठ । हाडको क्यान्सरबाट पीडित बागलुङ भीमापोखराका रेशम आलेमगरको उपचार्रार्थ जनस्तरबाट रु २० लाख सहयोग सङ्कलन भएको छ । भारतको गान्धी अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका आलेमगरको सहयोगका लागि रेशम आले उपचार सहयोग समिति गठन गरेर सहयोग अभियान चलाइएको छ । … बाँकी अंश »
स्तन क्यान्सर पीडितलाई रु डेढ लाख
Tags: alert-news, cancer, dhurkot, facebook, gulmi
धुर्कोट,गुल्मी, २४ वैशाख । आर्थिक अभावमा स्तन क्यान्सरको उपचार गर्न नसकेकी गुल्मी हस्तीचौरकी वसन्ती कुँवरलाई दर्ुवईमा बस्ने नेपालीले रु डेढ लाख सहयोग गरेका छन् । हस्तीचौर- ३ की वसन्तीलाई रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा गएका गुल्मेलीले रु एक लाख ५१ हजार… बाँकी अंश »
नौ क्यान्सर रोगी फेला
Tags: alert-news, cancer, health, lahan, siraha
लहान, ११ फागुन । सिरहाको लहान-५ स्थित क्यान्सर केयर सेन्टरमा सञ्चालित क्यान्सर परीक्षण शिविरमा नौ जना क्यान्सर रोगका सम्भावित बिरामी भेटिएका छन् । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था सिरहा र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा भएको दुईदिने परीक्षण शिविरमा चार… बाँकी अंश »